Jeremy Corbyn: Doorasho kale ayaa suuragal ah - BBC News Somali
Jeremy Corbyn: Doorasho kale ayaa suuragal ah
Image caption Hogaamiyaha xisbiga Labour-ka ee UK, Jeremy Corbyn
Hogaamiyaha xisbiga Labour-ka ee UK, Jeremy Corbyn, ayaa saadaaliyay in doorasho kale ay dalkaasi ka dhici doonto muddo sanad gudihiis ah, ayadoo xisbigiisa kuraas badan oo dheeraad ah uu ka helay codbixintii ugu dambeysay.
Corbyn ayaa sheegay in dalka uu u baahan wax ka wanaagsan dowlad laga xildhibaanno badan yahay, oo uu xisbiga Conservative-ka ku tiirsanaado taageero uu ka helay kan Democratic Unionist Party ee Northern Ireland.
Dhanka kale, wasiirkii hore ee maaliyadda Britain, George Osborne, ayaa ku tilmaamay ra'iisul wasaare Theresa May in ay tahay "meyd socda", ka dib markii ay doorashadii Khamiistii ku lumisay aqlabiyaddii uu lahaa xisbigooda Conservative-ka.
Osborne oo hadda tafaftire ka ah wargeys kasoo baxa London, ayaa BBC u sheegay in su'aashu ay tahay muddada ay Theresa May xaaladdaasi uu sheegay ay kusii jiri karto.
Haseyeeshee wasiirka gaashaandhigga, Michael Fallon, ayaa difaacay ra'iisul wasaaraha, asagoo sheegay in ay xisbiga usoo hoysay codadkii ugu badnaa muddo 34 sano ah.
Theresa May "oo aan iscasili doonin" natiijada awgeed